Chee Guvaaraa - Wikipedia
Ernestoo "Chee" Guvaaraa
Guyyaa dhalootaa: Waxabajjii 14, 1928
Guyyaa du'aa: Onkoloolessa 9, 1967
Ernestoo "Chee" Guvaaraa (Ispeeniffa: [ˈtʃe ɣeˈβaɾa]; Waxabajjii 14, 1928 – Onkoloolessa 9, 1967), baayyinaan El Chee ykn salphumatti Chee jedhamee kan beekkamu, geggeessaa warraqsa Maarkisistii, doktorii, barreessaa, geggeessaa riphee-loltootaa, dippilomaatii, fi abbaa tiyoorii waraanaa lammii Arjentiinaa ti. Warraaqsa Kuubaa keessatti nama ijoo kan ture Cheen, fulli isaa kan istaayilii qabu bakka hundatti mallattoo fincila gabrummaa fi aadaa uummataa keessatti addunyaa maratti kan beekkamu ta'e.
Dargaggeessa ta'ee yeroo medisinii baratutti, Guvaaraan biyyootaa Ameerikaa Kibbaa keessa deeme, yeroo kanas hiyyummaa, beela, fi dhibee argeen baayyee suukanneeffamee. Guvaara kuni saamicha kaappitaalizimii kan Yunaayitid Isteetis biyyoota Laatin Ameerikaa irratti geggeesitu ta'uu hubate. Kunis haalli kun akka jijjiirramuuf hojjachuuf fedhii guddaa isa keessatti uume. Fooyyessa hawaasummaa (social reforms) Gu'aatimaalaa keessatti pireezidaanti Jaakooboo Arbenz geeggeessuu keessatti hirmaachuuf isa kakaase, boodarra pirezidaantiin kun gargaarsa CIAtin fonqolchame, kunimmoo ilaalcha siyaasaa Guvaaraa cimseef. Boodarra Meeksikoo Siitii keessatti, Guvaaraan Raa'ulii fi Fidal Kaastiroo wal bare, dhaaba isaanii Sochii Adoolessa 26ffaa jedhamutti makame, bidiruu Giraanmaa (Granma) jedhamtu yaabbatees mootummaa abbaa hirree Fulhensiyoo Baatistaa kan USn deeggaramu kuffisuuf gara Kuubaa deeme. Guvaaraan oduma hin turin finciltoota biratti baayyee jaallatame, itti-aanaa ajajaa ta'ees muudame. Waraana riphee-lolaa waggaa lama fudhate kan mootummaa Baatistaa kuffisuun milkaa'e keessattis shoora olaanaa tabate.
Warraaqsa Kuubattiin booda, Guvaaraan mootummaa haaraa kana keessatti gaheewwan ijoo hedduu tabate. Kana keessaa ol iyyannoo namoota manni murtii warraaqsaa yakka waraanaa hojjachuu itti murteesse qorachuu fi namoota dhukaasanii isaan ajjeesan too'achuu, fooyyessa lafa qonnaa akka ministeera indastiriitti too'achuu, duula dubbisuu fi barreessuu biyyoolessaa geggeessuu, pirezidaantii baankii biyyoolessaa fi daarekterii leenjii humna waraanaa Kuubaa, fi dippilomaatii sooshaalizimii Kuubaa bakka bu'u ta'uun addunyaa mararra deemuu ture.
Retrieved from "https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Chee_Guvaaraa&oldid=26677"
Last edited on 16 Sadaasa 2014, at 12:47